juillet 2016 – filazantsaramada
Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Tanjombato, Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)
Fihaonana savaranonando. Mampivelatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana Loterana eto anivon’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) ny Feon’ny filazantsara (FF). Nisy noho izany fihaonana tamin’ny Pastora Randrianarison Henri Réné, Mpitondra Fitandremana Tanjombato, Fileovana Anosibe ho fampahalalana azy ny fiaraha-miasa azo atsangana amin’ny alalan’ny Seminera Fampiofananana antsoina hoe « Fampitaovana ny olona masina ». Fiaraha-miombon’antoka izay mikendry indrindra ny fampandrosoana […]
Publié parfilazantsaramada juillet 26, 2016 août 5, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Tanjombato, Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)
Fandefasana horonan-tsarimihetsika Rtoa Isabelle dia mpampianatra eny amin’ny Lycée Andoharanofotsy no sady mpiara-miasa an-tsitrapo eo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF). Amin’ny maha anisan’ny mpanabe azy eo anivon’ity Sekolim-panjakana ity dia niezaka hatrany izy nampiely ny Filazantsara teo an-toerana. Tsy tapaka noho izany izy nanentana ireo mpianatra hianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), […]
Publié parfilazantsaramada juillet 20, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Andoharanofotsy
NY FANAHY MIHAOSA DIA HOVOKISAKO
« Dia nasainy nipetraka tamin’ny tany ny vahoaka; ary dia nandray ny mofo fito Izy ka, ka rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony ny mpianany mba arosony; dia narosony teny anoloan’ny vahoaka izany. » Marka.8.6 Raha dinihina ny Testamenta Taloha dia tsapa ny fitahian’Anriamanitra ny olony dia ny zanak’Isiraely izany. Raha nisy ny hanoanana tany an’efitra dia […]
Publié parfilazantsaramada juillet 15, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANAHY MIHAOSA DIA HOVOKISAKO
Club Feon’ny Filazantsara (FF), Lycée Nanisana
Fiaraha-mivavaka Saika manomboka ny volana Jolay avokoa ireo fanadinam-panjakana ho an’ny Sekoly eto Madagasikara. Ny Zoma 8 Jolay folakandro àry, toy ny fanao isan-taona dia tonga niara-nivavaka tamin’ny mpiara-miasa tao amin’ny Foibe FF Ampandrana ireo mpikambana ao anatin’ny Club FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fiaraha-mivavaka izay natao indrindra ho fiaraha-midera an’Andriamanitra noho ny famaranana ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 14, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Club Feon’ny Filazantsara (FF), Lycée Nanisana
MIHOATRA NOHO NY AN’NY MPANORA -DALANA:
« Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo. » Matio 5:20 Raha ny fanarahan-dalàna dia tena fatratra ny fanatanterahan’ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna izany. Ka na dia ny dia an-tongotra atao ny andro sabata aza dia isaina. Nefa, hoy ny Soratra Masina hoe: Samy […]
Publié parfilazantsaramada juillet 8, 2016 juillet 6, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIHOATRA NOHO NY AN’NY MPANORA -DALANA:
NY FIHAINOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.
« Kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny harato. » Lioka 5:5b Rehefa nifanizina tamin’i Jesosy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia niditra teo an-tsambokely Jesosy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Izy dia nasainy niditra tamin’ny lalina ireo mba handatsaka ny haratony. Fa Simona namaly hoe efa hatramin’ny alina no nikely aina […]
Publié parfilazantsaramada juillet 1, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIHAINOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.
Mba samy handray ny fanjakan’Andriamanitra ny olona rehetra Anisan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ramatoa Verotiana Esther izay miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) eny amin’ny FLM Ankazotoho Fileovana Anosibe (SPANta). Nanasa ny FF hanentana sy hamporisika ireo Kristiana hazoto handalina ny tenin’Andriamanitra izay atolony araka izany izy ireo nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 1, 2016 juillet 1, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana